'को नेपालको मित्र, को नेपालको शत्रु चिनाउन तिमीहरुले सिकाइरहनु पर्दैन '
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भारतीय पत्रकार अरनभ गोस्वामीको कार्यक्रम द डिबेट विथ अरनभ गोस्वामी मा नेपालको राष्ट्रियताको विषयमा एक रहेको बताएका छन् ।
उनले गोस्वामीलाई जबाफ दिदै भनेका छन्, 'नेपालमा नेपाली काँग्रेस विपक्षी दल भए पनि देश सीमाको विषयमा भने एक रहेको छ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले लिएको कदमको हामी पक्षमा रहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस कडा छ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँको आफ्नो स्टाइल हो ।'
भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो हो भन्दै सडक नै बनाएको थियो । नेपालले भुमि अतिक्रमण गर्दै भारतले सडक बनाएपछि नेपालले उक्त कार्यको खण्डन गरेको थियो । साथै नेपालले ती क्षेत्रहरु समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि चर्केको विवादले ठुलो रुप लिइरहेको छ ।
उक्त विषयमा बोल्दै मिनेन्द्र रिजालले भारतीय पत्रकार गोस्वामीलाई मुखभरीको जबाफ दिएका थिए । उनले मुख्य विषयलाई मोडेर चीनले नेपाली नेताहरुलाई उचालेको आरोप लगाएका थिए भने मिनेन्द्र रिजालले आफ्नो देशको विषयमा बोल्न कसैको पक्ष विपक्ष लिनु नपर्ने बताएका थिए । उनले जबाफ दिदै भनेका छन्, 'भारत पनि हामीलाई उत्तिकै महत्वपुर्ण छ, चीन पनि हामीलाई उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । कुन देश नेपालको मित्र हो कुन देश नेपालको शत्रु हो त्यो निर्णय नेपालले गर्छ, त्यो अधिकार भारतलाई छैन ।'
पत्रकार अरनभ गोस्वामीले भने चीनलाई मुख्य केन्द्रमा बनाएर उनलाई बारम्बार प्रश्न गरेका थिए । चीन नेपालको शत्रु भएको समेत गोस्वामीले बताएका थिए ।
नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल